Vahaolana orthopedic - Medical Aid International
Trauma orthopedic ary
Vahaolana fanoloana iraisana
Eto amin'ny Medical Aid International dia takatsika fa ny lafiny ara-pahasalamana matetika dia eo amin'ny lafiny fitsaboana. Na tongotra tapaka, valahana na fanoloana lohalika dia manana vahaolana izahay hanome vahaolana mora vidy miaraka amin'ny fahaiza-manao logistik hanomezana izay ilainao. Ny rafitry ny orthopedika dia maodely tanteraka ahafahanay mampifanaraka ny filanao ilaina.
JEREO NY Eto ny fonosana fonosana orthopedika ivelany miaraka amin’ny Rafitra fandavahana Orthopedic Arbutus .
Fitaovana trauma sy fitaovana fampitaovana
Avy amin’ny famantsihana intramedullary mankany amin’ny takelaka misy taolana dia manana ny vahaolana amin’ny fandidiana trauma izahay. Hita tao amin’ny “ https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikorohanay&oldid=18879716 ” Modular ny rafitray, mamela anay hifanaraka manokana amin’ny takian’ny hopitaly – lehibe na kely.
Tandapa orthopaedika sonia sy lohalika
Signature Evolve ™ stem
Ny tsanganana Signature Evolve ™ dia amboarina avy amin’ny vy tsy misy fatran’ny azota. Ny famolavolana taper roa voadio tsara dia manampy amin’ny famoronana famoahana radial compressive, ao anatin’ny lamba simenitra ary mampihena ny fifandirana eo amin’ny simenitra sy ny implant.
Ny rafitra dia manana offset 4 samihafa (35mm, 37.5mm, 44mm, 50mm) misy habe 2 ka hatramin’ny 4 isaky ny offset. Ity fitambarana offset / habe ary famolavolana tsy misy kodiarana ity dia ahafahan’ny mpandidy manitsy ny offset hip sy ny halavan’ny tongotra tsy miankina amin’izy samy izy.
Izy io dia manana fifandraisana 12/14 ho an’ny adaption mora amin’ny safidy lohan’ny loha sy taper. Ny PMMA distal centraliser dia mampihena ny fametrahan’ny teboka ny vatan-kazo amin’ny simenitra, ary mamela ny fifindra-monina lavitra ny vatan-kazo ao anaty akanjon’ny simenitra.
Miorina amin’ny filozofia famolavolana voaporofo sy habe fanta-daza fanta-daza, ny rafitra Evolve ™ dia azo ampiasaina hitsaboana karazan-anatomie am-pito.
Amboara lojika sonia
Ny rafitra Signature Orthopedics Logical ™ dia rafitra kapoaka maodely izay manolotra kapoaka, fikolokoloana ary safidy azo atao betsaka ho an’ny fahafaha-miasa intraoperative *.
Ny kaopy dia amboarina avy amin’ny firaka titanium ary nopetahany takelaka misy ny haitao fandrakofana zavakanto mba hampiroboroboana ny fametrahana simika simika. Ireo kaopy dia tsy misy ao anaty loaka, safidy 3 ary safidy maro-lavaka. Ny kapoaka dia azo ampiasaina amin’ny karazan-tsipika polyethylene ampifandraisina, ao anatin’izany ny variana amin’ny volo, ny sisiny ary ny teritery. Azo alaina ao amin’ny akora delta BIOLOX * ihany koa ny safidin’ny seramika vita amin’ny ceramic.
Ny kaopy lojika ™ dia tohanan’ny rafitry ny fitaovana lozisialy nohavaozina. Ny napetraka fitaovana lojika dia ahitana lovia roa ho an’ny fametahana fitaovana milamina sy mahomby. Ny lovia voalohany dia misy ny fitaovana fototra rehetra ilaina amin’ny fomba rehetra. Ny fitoeram-bokatra faharoa dia toy ny tranga fanampiny izay tsy ilaina afa-tsy ho an’ireo marary kely sy lehibe.
Vodin'izao tontolo izao sonia
The Signature Orthopedics World Knee ™ dia rafitra lohalika marobe sy azo ovaina natao ho an’ny fahalalahana sy mora ampiasaina amin’ny tsena isan-karazany. Ny rafitra dia manolotra fitambarana femoral sy tibial amin’ny fihazonana cruciate, ny fiorenan’ny posterior ary ny pivot medial ary atolotra amin’ny femur femur sy habe tibia sivy. Ny interface femur / mitondra / tibia manavao dia mamela ny fifanakalozam-bola bebe kokoa eo amin’ireo singa mba tsy hahitana fahaiza-manao toy izany eo amin’ny habe. Ny safidim-behivavy dia nohatsaraina miaraka amin’ireo kinova PS symmetrical miaraka amin’ireo femur asymmetrika izay mifanentana amin’ireo safidy metaly PS sy CR ary CR. Ny singa femoral sy tibial dia atolotra ao amin’ny chrome cobalt, ary ny safidy azo atao amin’ny polyethylene mifamatotra be. Ny bearings polyethylene dia misy amin’ny hatevin’ny sisiny 10mm ka hatramin’ny 13mm amin’ny 1mm increment, ary 15mm sy 17mm ho an’ny habe sivy rehetra.
Ny fitaovana World Knee ™ dia novolavolaina ho mailaka sy malefaka handraisana teknika fandidiana sy safidy maro karazana. Na dia marobe aza izy, ny fitaovana fanavaozana dia noforonina mba ho habaka sy lanjany araka izay azo atao miaraka amin’ny rafitra fototra misy fantsona tokana. Ny fitaovana dia azo zahana avy eo mba hamela ny fanjairana amin’ny safidin’ny mpandidy.